सर्लाहीका ७ स्थानमा ६२ देखि ६४ वर्षका बृद्धबृद्धालाई आजदेखि खोप लगाइने
कमलामाई खबर सम्वाददाता प्रकाशित: २०७८-२-२४ गते ३०६ पटक हेरिएको
मंगलबार(आज)बाट सर्लाहीमामा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान चलाउँदै छ । चीनबाट अनुदानमा प्राप्त १० लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाल आएपछि सर्लाहीमा पनि ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका बृद्धबृद्धाहरुलाई लगाउन लागिएको हो ।
चीनसँग सिमाना जोडिएका स्थानीय तहमा १८ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले बताउनु भयो। भने काठमाण्डौँ उपत्यकामा ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समुहका बृद्धबृद्धाहरुलाई खोप लगाईने छ ।  ।
देशभरिका ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरुकोसंख्या ८ लाख रहेका र सबैलाई खोप पर्याप्त नहुने भएकाले उपत्यकाबाहिर उमेर समूह घटाउनु परेको डा.गौतमले बताउनु भयो । उपत्यकाबाहिर खोप लगाउँदा पहिलो प्राथमिकता ६४ वर्षकालाई, त्यसपछि खोपको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः तल्लो उमेरकालाई दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचना जारी गरेको छ ।
सर्लाहीमा खोप लगाउन विभिन्न ७ स्थान तोकिएको छ । यो चरणमा यसअघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल कलेजका विद्यार्थी, इन्टर्न, ओजेटीमा रहेका नर्सिङ र पारामेडिक्सले भने पहिलो डोज पनि लगाउन पाउनेछन् । त्यस्तै यसअघि ५५ वर्षमाथि उमेर समूहमा खोप दिइसकेका हिमाली जिल्लाहरूले यही उमेर समूहमा पहिलो मात्रा लगाउन छुटेका व्यक्तिले पनि पहिलो मात्रा लगाउन पाउनेछन् ।
जिल्लामा उपलब्ध खोपको आधारमा कति उमेर समूहलाई लगाउने र खोप कार्यक्रम कति दिनसम्म चलाउने निर्णय जिल्लामा कोभिडविरुद्धको खोप समन्वय तथा अनुगमन समितिले गर्नेछ । समितिको संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । ‘यो समितिले कति वटा खोप केन्द्र कहाँ–कहाँ राख्ने र कति दिन चलाउने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ,’डा. गौतमले बताउनु भयो । स्थानीय तहले निर्धारण गरेको खोप केन्द्रमा उमेर खुल्ने सरकारी कागजपत्र देखाएको आधारमा खोप लगाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २१ लाख १३ हजार ८० जनाले खोपको पहिलो मात्रा र ७ लाख १५ हजार १ सय ६३ जनाले दोस्रो मात्रा लगाएका छन् ।